Guddiga nabaddeynta Jubbaland oo ku guuleystay inta badan howlihii loo xil-saaray (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 28, 2013 5:36 b 0
Kismaayo, July 28, 2013 – Magaalada Kismaayo xilli haatan laga joogo dhawr todobaad waxaa laga yegleelay guddi loo xilsaaray nabadaynta Jubbaland iyo xallinta khilaafaaddada, kaasoo la siiyey shaqooyin cayiman oo uu ka hawlgalo.
Guddigaasi oo ahaa mid isku-dhaf ah, waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin, saraakiil ciidan, aqoonyahanno, iyo? odayaal dhaqan, waxaana arrimihii loo xilsaaray ay ahaayeen in ay xal-u-helaan khilaafaadyada Jubbaland, nabadayna ka dhex sameeyaan dadyawga deegaanka, isla markaan ay tiro-koobaan oo diiwaangaliyaan naf iyo maal wixii ku basbeelay dagaalladii Kismaayo ka dhacay.
Suldaan Cabdicasiis Maxamuud Yuusuf oo xubin ka ah guddiga una qaabilsan xiriirka guud ayaa ?u sheegay Radio Daljir in haatan ay meel wanaagsan wax u marayaan guddiga iyo howlihiisa, wuxuu iclaamiyey in guddiga ay u hir-galeen howlo muhiim ah, sida helista iyo xogta wixii hanti ku luntay dagaaladii ka dhacay magaalada Kismaayo.
Guddiga ayaa haatan ku mashquulsan arimo wacyi gelin ah iyo in dadka magaalada Kismaayo ay is dhex-gal yeeshaan, si xal buuxa looga gaaro dhibaatooyinka soo noq noqda, wuxuu kaloo Guddigu ku guulaystay in la abuuro is-kaashi dhexmara ganacsatada, Intaas kadib waxaa haatan la wadaa sidii hantida loogu celin lahaa shaqsiyaadkii lahaa.
Dhegeyso waraysi oo Cabdifatax ?Cumar Geedi la yeeshay Suldaan Cabdicasiis Maxamuud.